मुख्य खबर – Page 20 – Radiokathmandu मुख्य खबर – Page 20 – Radiokathmandu
२८ कात्तिक, काठमाडौं । समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ । सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आएका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि सरकारबाट बहिर्गमन तत्काललाई टरेको छ । आजबाट काठमाडौंमा…
राज्य व्यवस्थाको निर्णय- निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष
२८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने निर्णय संघीय संसद अन्तरगतएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छ। तर यो हरेक वर्ष ६/६ महिना थपिनेछ र २०२१ सालदेखि मात्र पूर्ण…
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) काे धार्मिक जागरण यात्रा शुरु
२८ कात्तिक, जनकपुरधाम । धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले बिहीबारदेखि धार्मिक जागरण यात्रा शुरु गरेको छ । यो यात्रा मङ्सिर ४ गतेसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ । सबै…
युवा संघले टुंग्यायो ७७ वटै जिल्लाकाे नेतृत्व (सूचीसहित)
२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले जिल्ला नेतृत्व टुंगो लगाएको छ । गत कार्तिक १६ गते बसेको राष्ट्रिय युवा संघको बैठकले जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक चयन गर्ने निर्णय गरेको…
बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद पर्यटकीय नगरी पोखरा जादै
२८ कात्तिक, काठमाडौं । चारदिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद बिहीबार पर्यटकीय नगरी पोखरा जादैछन् । पोखराको फेवातालमा उनलाई डुंगा सयर गराउने कार्यक्रम छ । उनी नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौंबाट १० बजे…
२७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ब‌गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । काठमाडौंको मेरियट होटलमा भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्री…
बंगलादेशी राष्ट्रपति हमिदसँग देउवाको भेटवार्ता
२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको चारदिने भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन् । बुधबार बिहान नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसंग भेटवार्ता गरेकाे उनले दिउसाे कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासंग भेटवार्ता गरेका छन् ।
निदान अस्पतालका सीईओसहित ५ जना नख्खु कारागारमा
२७ कात्तिक, काठमाडौं । ललितपुरको निदान अस्पतालमा अनाधिकृत रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका ५ जना थुनामा पठाइएका छन् । जिल्ला अदालत, ललितपुरले मंगलबार अस्पतालका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विपेन्द्र प्रधानसहित ५…
सबै स्थानीय तहमा बैकं सेवा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन
२७ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकिङ सेवा नपुगेका स्थानीय तहमा तत्काल सेवा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । हाल करिब १९ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंकिङ सेवा पुग्न बाँकी रहेको बताउँदै…
२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको चारदिने भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन् । बुधबार बिहान नेकपा अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति हमिदसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्ताका लागि प्रचण्ड राष्ट्रपति हमिद…